Nhaurirano Pakati peZanu-PF neMDC Dzambomiswa
Nhaurirano pakati peMDC neZanu-PF dzamboti mirei sezvo mapato maviri aya atadza kuwirirana.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nyaya yebumbiro remitemo idzva, uye zuva resarudzo, ndizvo zvamisa zvinhu zvose. Zanu-PF inoti bumbiro remitemo ngariitwe papera sarudzo, ukuwo MDC ichiti hapana chibvumirano chinganyoreranwe pasi kana pasati paitwa bumbiro remitemo idzva.
Mapato maviri aya akaenda kuna mutongi gava wenhaurirano idzi, VaThabo Mbeki, neMugovera vakavaudza kuti vainge vatadza kuwirirana. Asi VaMbeki vari kutarisirwa kuti vazotanga kugadzirisa nyaya iyi musi wa 21 Zvita, mushure mekunge vapedza musangano wavo weANC. MDC inoti Zanu-PF yave kudududza pachibvumirano chayakaita muna Chikumi chekuti MDC ikaitsigira paConstitutional Ammendment Number 18, iyo yaizobvuma kuumbwa kwe bumbiro remitemo idzva.
Asi vakuru muZanu-PF vanoti hapachina nguva yekuti vanhu vazeye vakapedza nyaya yebumbiro remitemo sarudzo dzisati dzaitwa muna Kurume.
VaErnest Mudzengi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari National Director weNCA vanoti MDC yakanyangira yaona.
VaMudzengi vaudza mutori wenhau dzeStudio7, Blessing Zulu, kuti MDC inofanirwa kushinga kusvika yapedza basa rayakatanga
Tichiri panyaya iyi, masangano akazvimirira oga anotiwo haasi kufara nezviri kubuda munhaurirano dziri pakati peMDC ne Zanu-PF.
Masangano aya anotiwo haasi kufara nekuvandudzwa kuri kuda kuitwa zvimwe zvikamu zvemitemo ye POSA, AIPA pamwe neBroadcasting Services Act, veruzhinji vasingapihwe mukuna wekuisa pfungwa dzavo pamitemo iyi.
Kuvandudzwa kwemitemo iyi kunotevera nhaurirano dziri pakati peMDC ne Zanu-PF.
VaJacob Mafume National Co-ordinator weCrisis in Zimbabwe Coaltion, uye vari gweta vaudza Patience Rusere weStudio 7 kuti VaMbeki vanofanira kunge vakataura nevamwe vari mumasangano akazvimirira oga.